သှေးဆုံးပွီး သှေးပွနျဆငျးခွငျး – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သှေးဆုံးတယျဆိုတာ သငျနောကျဆုံးအကွိမျ ရာသီလာပွီး နောကျပိုငျး တဈနှဈကြျောအထိ လုံးဝမလာတော့တဲ့အခြိနျကိုပွောတာပါ ။ အဲ့လို တဈနှဈကြျောနောကျပိုငျးမှ သှေးပွနျဆငျးနတော အနီ အစကျအပြောကျလေးတှေ စှနျးထငျးတာတှရေ့တာကို သှေးဆုံးပွီး သှေးပွနျဆငျးတာလို့ ချေါတယျ ။ ဒီလို သှေးပွနျဆငျးတာဟာ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ အခွအေနတေဈခုပါ ။
ဒီလိုအခွအေနမြေိုးဖွဈတဲ့ အခါ ပေါ့ပေါ့ဆဆမနဘေဲ ဖွဈပှားတဲ့ အကွောငျးအရငျးသိဖို့ သသေခြောသခြောခြာ စမျးသပျရနျ ဆရာဝနျဆီ သှားပွပါ ။ အမြားအားဖွငျ့ သာမာနျကုသနိုငျသော ရောဂါဖွဈပမေယျ့ တဈခါတဈရံ ဆိုးဝါးတဲ့ ရောဂါတှရေဲ့ ရောဂါလက်ခဏာ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့လဲ စောစောစီးစီး အခြိနျမီ သိရှိမှသာ ဆိုးဝါးပွငျးထနျတဲ့ရောဂါတှေ ဥပမာ ကငျဆာရောဂါတှမြေိုးကနေ လငျြလငျြမွနျမွနျ ထိထိ ရောကျရောကျ ကုသနိုငျမှပါ ။
ဘယျလိုအခွအေနတှေကေ သှေးပွနျဆငျးစတောလဲ ?
သှေးပွနျဆငျးတာရဲ့ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျမှာ ဘာအကွောငျးရငျးကွောငျ့ ဒီလိုသှေးပွနျဆငျးရတယျဆိုတဲ့ တိတိကကြအြဖွမေရှိပါဘူး ။ မြားသောအားဖွငျ့ အရမျးကွီး စိတျပူလောကျစရာမဟုတျဘဲ အကယျ၍ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရောဂါဆိုလြှငျလဲ ဓာတျခှဲစမျးသပျတာတှကေနေ ရောဂါကိုသိနိုငျမှာပါ ။ သှေးပွနျဆငျးတာတှရေဲ့ အကွောငျးအရငျးအမြားစုအနနေဲ့
* မိနျးမကိုယျအတှငျးသားတှမှော ယောငျရမျးပွီး ဖုံးအုပျထားတဲ့အရာတှေ ပါးလာတာ
* သားအိမျအတှငျး ဖုံးအုပျထားတဲ့အရာတှေ ပါးလာတာ
* သားအိမျခေါငျး ဒါမှမဟုတျ သားအိမျအတှငျး သိပျမစိုးရိမျရတဲ့ အလုံးတှပေျေါလာတာ
* ဟျောမုနျးကုထုံးတှကွေောငျ့ သားအိမျနရံတှထေူလာတာ
* သားအိမျ နဲ့ သားအိမျခေါငျးအတှငျး မူမမှနျတာ
ဒါပမေယျ့ ကနျြတဲ့ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးမှာတော့ ဒီလိုသှေးပွနျဆငျးခွငျးဟာ သားအိမျ ကငျဆာ သို့မဟုတျ သားအိမျခေါငျး ကငျဆာနဲ့ ဆကျစပျနတေတျတဲ့အတှကျ ပေါ့ပေါ့တနျတနျသဘောမထားဘဲ သခြောစဈဆေးဖို့ လိုပါတယျ ။
ဘယျလို ကုသမှုခံယူမလဲ ?
မြားသောအားဖွငျ့ အိုဂြီဆရာဝနျတဈဦးဆီ သှားပွရနျ ညှနျကွားခံရမှာပါ ။ အဲ့ဒီမယျ
* သငျ့သှေးဆငျးခွငျးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ ရောဂါရာဇဝငျ
* တဈကိုယျလုံး စဈဆေးတာ
* သငျ့မိနျးမကိုယျအတှငျးပိုငျးနဲ့သားအိမျခေါငျးအတှငျးကို သခြောကွညျ့ရှုစဈဆေးပွီး အတှငျးမှ အရညျတခြို့ကို ဓာတျခှဲစဈဆေးရနျ နမူနာ ယူပါလိမျ့မညျ ။
နောကျပွီး တခြို့သော စဈဆေးမှုတှကေို လုပျဖို့လဲ အကွံပွုပါလိမျ့မယျ
* သားအိမျခွဈပွီး အသားစယူတာ အစရှိသညျတို့ ဖွဈတယျ ။
* မိနျးမကိုယျနဲ့ သားအိမျနံရံအတှငျးပိုငျးဖုံးအုပျထားတာတှေ ပါးလာတာမြိုးတှကွေောငျ့ ဖွဈတဲ့ ကိစ်စတှမှော အီစထရိုဂငျြ ဟျောမုနျး တှပေေးလရှေိ့ပါတယျ ။ သောကျဆေးပွား ၊ မိနျးမကိုယျထဲထညျ့တဲ့ ဆေးပွား ၊ ဂယျြလျ အစရှိသညျဖွငျ့ ပုံစံမြိုးစုံလာပါတယျ ။
* အလုံးဖွဈနတောမြိုးဆိုရငျတော့ ခှဲစိတျပွီး ဖယျရပါတယျ ။
* သားအိမျအတှငျးနံရံတှထေူလာတာမြိုးတှဆေိုရငျ ဆေးပေးတာရော ခှဲစိတျတာရောကို ရောဂါအခွအေနအေလိုကျလုပျဆောငျပါတယျ ။
သွေးဆုံးတယ်ဆိုတာ သင်နောက်ဆုံးအကြိမ် ရာသီလာပြီး နောက်ပိုင်း တစ်နှစ်ကျော်အထိ လုံးဝမလာတော့တဲ့အချိန်ကိုပြောတာပါ ။ အဲ့လို တစ်နှစ်ကျော်နောက်ပိုင်းမှ သွေးပြန်ဆင်းနေတာ အနီ အစက်အပျောက်လေးတွေ စွန်းထင်းတာတွေ့ရတာကို သွေးဆုံးပြီး သွေးပြန်ဆင်းတာလို့ ခေါ်တယ် ။ ဒီလို သွေးပြန်ဆင်းတာဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ ။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့ အခါ ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေဘဲ ဖြစ်ပွားတဲ့ အကြောင်းအရင်းသိဖို့ သေသေချာသေချာချာ စမ်းသပ်ရန် ဆရာဝန်ဆီ သွားပြပါ ။ အများအားဖြင့် သာမာန်ကုသနိုင်သော ရောဂါဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ ဆိုးဝါးတဲ့ ရောဂါတွေရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့်လဲ စောစောစီးစီး အချိန်မီ သိရှိမှသာ ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေ ဥပမာ ကင်ဆာရောဂါတွေမျိုးကနေ လျင်လျင်မြန်မြန် ထိထိ ရောက်ရောက် ကုသနိုင်မှပါ ။
ဘယ်လိုအခြေအနေတွေက သွေးပြန်ဆင်းစေတာလဲ ?
သွေးပြန်ဆင်းတာရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ ဘာအကြောင်းရင်းကြောင့် ဒီလိုသွေးပြန်ဆင်းရတယ်ဆိုတဲ့ တိတိကျကျအဖြေမရှိပါဘူး ။ များသောအားဖြင့် အရမ်းကြီး စိတ်ပူလောက်စရာမဟုတ်ဘဲ အကယ်၍ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရောဂါဆိုလျှင်လဲ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တာတွေကနေ ရောဂါကိုသိနိုင်မှာပါ ။ သွေးပြန်ဆင်းတာတွေရဲ့ အကြောင်းအရင်းအများစုအနေနဲ့
* မိန်းမကိုယ်အတွင်းသားတွေမှာ ယောင်ရမ်းပြီး ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရာတွေ ပါးလာတာ
* သားအိမ်အတွင်း ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရာတွေ ပါးလာတာ
* သားအိမ်ခေါင်း ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်အတွင်း သိပ်မစိုးရိမ်ရတဲ့ အလုံးတွေပေါ်လာတာ
* ဟော်မုန်းကုထုံးတွေကြောင့် သားအိမ်နရံတွေထူလာတာ
* သားအိမ် နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းအတွင်း မူမမှန်တာ
ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာတော့ ဒီလိုသွေးပြန်ဆင်းခြင်းဟာ သားအိမ် ကင်ဆာ သို့မဟုတ် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာနဲ့ ဆက်စပ်နေတတ်တဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘဲ သေချာစစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ် ။
ဘယ်လို ကုသမှုခံယူမလဲ ?
များသောအားဖြင့် အိုဂျီဆရာဝန်တစ်ဦးဆီ သွားပြရန် ညွှန်ကြားခံရမှာပါ ။ အဲ့ဒီမယ်
* သင့်သွေးဆင်းခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါရာဇဝင်
* တစ်ကိုယ်လုံး စစ်ဆေးတာ
* သင့်မိန်းမကိုယ်အတွင်းပိုင်းနဲ့သားအိမ်ခေါင်းအတွင်းကို သေချာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး အတွင်းမှ အရည်တချို့ကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန် နမူနာ ယူပါလိမ့်မည် ။
နောက်ပြီး တချို့သော စစ်ဆေးမှုတွေကို လုပ်ဖို့လဲ အကြံပြုပါလိမ့်မယ်
* သားအိမ်ခြစ်ပြီး အသားစယူတာ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်တယ် ။
* မိန်းမကိုယ်နဲ့ သားအိမ်နံရံအတွင်းပိုင်းဖုံးအုပ်ထားတာတွေ ပါးလာတာမျိုးတွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်း တွေပေးလေ့ရှိပါတယ် ။ သောက်ဆေးပြား ၊ မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်တဲ့ ဆေးပြား ၊ ဂျယ်လ် အစရှိသည်ဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံလာပါတယ် ။
* အလုံးဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ပြီး ဖယ်ရပါတယ် ။
* သားအိမ်အတွင်းနံရံတွေထူလာတာမျိုးတွေဆိုရင် ဆေးပေးတာရော ခွဲစိတ်တာရောကို ရောဂါအခြေအနေအလိုက်လုပ်ဆောင်ပါတယ် ။